Loza mitatao :: Mamerina miantso vonjy ny mponina eny Ampasamadinika • AoRaha
Mitaky ny hamerenana amin’ ny laoniny amin’ny fotoana faran’ izay haingana ny faritra nihotsaka eny Ampasamadinika ny mponina eny an-toerana. Efa andro maro no notataovandoza ireo fianakaviana maro lasibatr’ity tranga ity saingy tsy mbola nanomboka, hatramin’ny omaly, ny asa fanarenana sy fanamboarana an’ilay lavaka mangotanatana eo amin’ny faritra fivezivezen’izy ireo. Tsy mety voavaly ara-dalàna sy ara-drariny ny antso vonjy ataon’ny mponina.
Nametraka sora-baventy ho fanairana an’ireo tompon’ andraikitra sy manampahefana isan’ambaratongany ny mponina, tamin’ny faran’ny herinandro. Tahotra andro aman’alina amin’ny loza mety haterak’ity fihotsahan-tany ity no iainan’izy ireo satria zara fa nosaronana labasy fotsiny ny faritra mihotsaka. Tsy nisy tohiny ny fe-potoana fanarenana ny simba nomen’ny kaominina Antananarivo renivohitra tamin’ny tompon’ny tany, izay voalaza fa fototry ny fihotsahana.
Fijerena ny lafiny teknika
“Olona mitaona fasika sy vato kely no mifamezivezy ety, andro vitsivitsy izay, kanefa tsy misy asa mandeha akory. Tsy hahatazona ny tany mihitsy io labasy io raha sanatria ka ho avy be indray ny orana. Trano ampolony no tandindonin-doza ety. Manginy fotsiny ny fahasahiranana amin’ny lalana ifamezivezena. Miantso ny kaominina izahay amin’ny fanairana mafy an’ilay tompon’antoka izahay, sao hitera- doza ho anay ny mety fitaran’ ny fahasimbana”, hoy ny raim-pianakaviana monina, eny Ampasamadinika.
Nambaran-dRasamoelimihamina Niry, talen’ny fanajariana ny tanàn-dehibe ao amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA), fa efa noterena hanao ny asa ilay olona mba hiarovana ny toerana ao anatin’ny fotoana fohy. “Efa nosaronany aloha ny toerana. An-dalam-pandinihana ny fanatanterahana ny asa izy ireo, amin’izao fotoana izao, satria tsy afaka tonga dia hatao amin’izao. Misy lafiny teknika tsy maintsy jerena mikasika ny zavatra sao sanatria hisy olana indray”, araka ny fanampimpanazavany.
Fanampiana hoan’ireo very asa :: Hahazo vola tsy haverina amin’ny Cnaps ireo mpiasa mpikambana